Sir Culus Sababaha Madaxweyne Garguurte ku qasbay Colaadinta bulshadda Habargidir ? | Habargidir Community
Habargidir.info- Shaqsiyaad uu ka mid yahay Faarax Cabduqadir ayaa Madaxweyne Xasan Garguurte ka dhaadhiciyay inuu colaadinta Habargidir ku kasban karo taageerada Beesha Abgaal iyo waqti korarsi uu xilka ku sii heysto.
Inkastoo Faarax Cabduqadir iyo dadka daaha gadaashiisa ka maamulaya dhamaantood yihiin cadawga Hawiye hadana waxaa bilahii la soo dhaafay Muqdisho iyo goboladda dhexe ka socday mashruuca colaada Madaxweyne Garguurte bixiyay.
1- Madaxweyne Garguurte hadii uu sii wado tacadiyada iyo bahdilaada bulshadda Habargidir waxaa hubaala iney beesha Habargidir hubka qaadan doonaan sida hadaba laga dareemay Muqdisho oo saansaan colaadeed ay ka muuqato.
Taageerada Abgaal wuxuu ku heli karaa Garguurte sida loo sheegay iney Habargidir la dagaasho.
2-Hadii Habargidir la dagaasho sidoo kale waxaa loo sheegay inuu heli doono waqti kororsi.
Maxeey tahay danta ugu jirta Faarax Cabduqadir iyo Cadawga Hawiye iney Muqdisho ku dagaalamaan Habargidir iyo Abgaal?
1- In beesha Caalamka laga dhaadhiciyo ineysan Muqdisho noqon karin Caasimadda Somalia sidoo kalena Hawiye u qalmim Madaxweyne maadama Habargidir iyo Abgaal colaad ka dhaxeeyso.
2-Ethiopia iyo Mareykanka oo labaduba aaminsan in dagaalkii Muqdisho ku qabsaday 1993 iyo kii 2007 intuba ay la galeen Habargidir.
Sida muuqato qorshahii Cadawga waa hirgelay 63% laakiin waxaa leeys weeydiinayaa beesha Abgaal Cismaan maka yihiin raali gabood faladda ay geeysanayaan shaqsiyaadka u dhashay ee Garguurte u yahay madaxda mase laga yaabaa iney qabiilnimo u difaacaan?
Garguurte wuxuu barakicinta iyo bahdilaada beesha Habargidir u xilsaaray shaqsiyaad ay ka mid yihiin Taliyaha Booliska Mr Gas Gas,Taliyaha Nabadsugida Mr Tuuryare,Taliye ku xigeenka Melleteriga Mr Cabdullahi Macalin Nur,Duqa Muqdisho ahna Gudoomiyaha gobolka Mr Muungaab,Xeer ilaaliye ku xigeenka Qaranka Axmed Cali Abokar iyo shaqsiyaad kale oo beeshiisa Abgaal u dhashay.
Shaqsiyaadkaan waxeey burburiyeen guryo iyo dhismayaal ganacsi oo beesha Habargidir laheyd,waxeey xireen oo Xabsiga u taxaabeen Saraakiishii Ciidanka,waxaana horey xabsiyada ugu jiray tiro lagu qiyaasay lix boqol iyo afartan Maxaabiis u dhalatay beesha Habargidir.
Madaxweyne Garguurte mashaariicda Turkiga iyo Dowladaha kaalmeeya Somalia wuxuu dhamaan siiyay dad u dhashay Beesha Abgaal,waxaa xafiiskiisa Agaasimeyaal looga dhigay todobo nin oo beesha Abgaal u dhashay,iyadoo lix ka mida ay yihiin Waceeysle.
Duqii Magaaladda,Gudoomiyahii Gobolka Banaadir,Maareyeyaashii Dekadda iyo Garoonka Muqdisho wuxuu dhamaan u magacaabay dad u dhashay beesha Abgaal,iyadoo degmooyinka gobolka Banaadir looga dhigay Gudoomiye dad u dhashay Abgaal 71%.
Arrimahaan oo dhan uma sameeynayo jaceyl uu Abgaal u qabo hasse yeeshee waxey ka tahay inuu kiciyo beesha Habargidir si uu waqti korarsi iyo taageerada beesha Abgaal u helo.
Sikastaba ha ahaatee,Beelweynta Habargidir waxeey Muqdisho ka wadaan dhaqdhaqaaqyo hubeeysan,waxaana Taangiyadda Amisom lagu wareejiyay hareeraha Madaxtooyadda maadama la sii ogyahay inuu dagaal lama huraan yahay ?